Jaamacadda Stafford Uganda oo Wasiirro ka tirsan Xukumadda Soomaaliya ka iibiyay Shahaadooyin Been abuur ah - Latest News Updates
Jaamacadda Stafford Uganda oo Wasiirro ka tirsan Xukumadda Soomaaliya ka iibiyay Shahaadooyin Been abuur ah
Qoraal lagu baahiyay Wargeyska New vision ee ka soo baxa dalka Uganda in la xiray jaamacadda Stafford oo ku taala magaalada Kampala, kadib markii lagu helay inay shahaadooyin been abuur ah ka iibiyeen xubno ka tirsan wasiiradda Soomaaliya.
Bogga twiterka ee wargayska New Vision ayaa lagu baahiyay in hadda xubno ka tirsan hay’adda dambi baarista Uganda ay su’aalo waydiinayaan maamulka jaamacadda Stafford oo lagu eedeeyay inay iyagu sabab u ahaayeen inay shahaadooyin been abuur ah Soomaaliya u soo diraan.
Maamulka jaamacadda Stafford la xiray waxaa lagu eedeeyay inay 79 shahaado oo been abuur ah u soo direen Soomaaliya, iyagoo siiyay mas’uuliyiin wasiiro ay ku jiraan kuwaas oo loo soo marsiiyay mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ku yaala waxaana shahaadooyinkaas mid ka mid shirkadaha Boostooyinka ee Muqdisho ka shaqeeya.
Mas’uuliyiin ka kala tirsan jaamacadda la xiray ee Uganda ku taala iyo tan Muqdisho ku taala ayaa dhawr mar is dhaafsaday qoraalo ay ku cadaynayaaan inay shahaadooyinkaas isku dhaafsanayaan.
Dhanka kale tiradda iyo magacyadda wasiiradda Soomaalida ah ee shahaadooyinka been abuurka ah laga iibiyay laguma shaacin Wargeyska New vision.
Xigasho- New Vision